Qarax weyn oo laga maqlay Magaalada Muqdisho iyo Faahfaahinta laga helay... - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Qarax weyn oo laga maqlay Magaalada Muqdisho iyo Faahfaahinta laga helay... - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Qarax weyn oo laga maqlay Magaalada Muqdisho iyo Faahfaahinta laga helay…
Wararka laga helayo magaalada Muqdisho ayaa sheegaya inuu qarax goor dhoweyd ka dhacay caasimadda, gaar ahaan agagaarka Km4.
Qaraxa oo laga maqlay inta badan magaalada ayaa faahfaahinta laga helay waxay sheegeysaa inuu ahaa Miino la dhigay meel u dhow Isgoyska KM4, waxayna qaraxay, iyadoo ay ciidamada Amniga xireen goobta markii dad shacab ah ay ku wargeliyeen inay arkeen Miinada.
Qaraxa ayaa dhacay intii aysan goobta soo gaarin kooxda miino-baarista, mana jirin wax qasaare ah oo ka dhashay, kadib markii goobta Miinada la dhigay ay xireen ciidamada oona diiday dadka iyo gaadiidka.
Laamaha ammaanka ayaa sheegay inuusan jirin khasaare ka dhashay qaraxa ka dhacay magaaladda Muqdisho, iyagoo sheegay inay ka war heleen goobta qarax la dhigay, kaddiba ay xireen waddooyinka u dhow goobta.
Previous articleAxmed Madoobe: “Haddii ay na anfaceyso Keli-talisnimo, Dagaal sokeeya kama dhaceen Soomaaliya..”
Next articleItoobiya iyo Q/Midoobay oo isla ogolaaday in la baaro xadgudubyadii ka dhacay Gobolka Tigray